Unogona Here Kuwedzera Pane Zvauri Kuita Pakunyevera Vamwe? | Yekudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Rimwe firimu rinonakidza risina mashoko rinonzi A Trip Down Market Street rinofadza vanoriona nekubudisa kwarinoita zvainge zvakaita upenyu muSan Francisco, U.S.A., pakatanga makore ekuma1900. Vakatora firimu racho vakaisa kamera nechemberi kwemota kuti itore vanhu vaiita chipatapata mumugwagwa. Zvinhu zvakatorwa zvaisanganisira ngoro dzaidhonzwa nemabhiza, motokari dzekare, vanhu vaitenga uye vakomana vaitengesa mapepanhau vachiita mabasa avo ezuva nezuva.
Chinosuwisa ndechekuti firimu iri rinofanira kunge rakatorwa muna April 1906 pangosara mazuva mashomanana kuti kudengenyeka kwenyika nemoto zvakauraya zviuru zvevanhu musi wa18 April zviitike, izvo zvakapotsa zvatoparadza nzvimbo iyoyo. Zvichida vamwe vakabuda pafirimu iri vakanga vatosarirwa nemazuva mashomanana vari vapenyu. Scott Miles, muzukuru wemumwe wevakagadzira firimu iri anoti: “Zvinosuruvarisa kuti pavanhu vanobuda ipapo, hapana aitomboziva nezvezvaizoitika kwavari.”
Muna 1906 kudengenyeka kwenyika uye moto zvakangoerekana zvaitika vanhu vasina kumbonyeverwa zvikaparadza nzvimbo yakakura yedhorobha reSan Francisco
Izvi zvakada kufanana nezviri kuitika mazuva ano. Isuwo tinorwadziwa zvikuru patinofunga nezvevavakidzani vedu. Vanorarama havo zuva nezuva vasingatombozivi nezvedambudziko rava pedyo zvikuru rekuparadzwa kwemamiriro ezvinhu aripo iye zvino uye kwemararamiro avari kuita. Asi kusiyana nekudengenyeka kwenyika kwakaitika vanhu vasingazive, pachiine mukana wekuti tinyevere vavakidzani vedu nezvezuva raJehovha rekuparadza vakaipa. Ungave uine nguva yawakaronga kuita basa repaimba neimba vhiki nevhiki, asi unogona here kuwedzera pane zvauri kuita pakunyevera vamwe?
JESU AIGARA AKAGADZIRIRA KUITA BASA
Muenzaniso waJesu wakanaka chaizvo nekuti aigara akagadzirira kuita basa. Aiparidzira munhu wose waaisangana naye, kusanganisira muteresi waakaona achipfuura nemugwagwa uye mukadzi waakaona patsime achimbozorora zvake masikati. (Ruka 19:1-5; Joh. 4:5-10, 21-24) Kunyange panguva dzaaida kuzorora, Jesu ainge akagadzirira kusiya zvimwe zvinhu zvaainge aronga kuti akwanise kudzidzisa vamwe. Kunzwira tsitsi kwaaiita vavakidzani vake kwakaita kuti aite zvakawanda muushumiri. (Mako 6:30-34) Mazuva ano vanhu vari kutevedzerawo sei Jesu pakuita basa rekuparidza vachiziva kuti nguva yapera?
VANOSHANDISA MIKANA YOSE
Melika anogara pane rimwe furati rinochengetedzwa zvikuru. Vakawanda vevavakidzani vake vadzidzi vanobva kune dzimwe nyika vane nhamba dzeserura dzisingawaniki mumabhuku emafoni uye mazita avo haana kunyorwa panowanikwa evamwe vanogara pafurati racho. Anoshandisa mikana yose yaainayo kutanga kukurukura nevanogara pafurati iri munzvimbo dzinofamba nevakawanda uye murifiti. Anoti, “Ndinotoiona sendima yangu.” Melika anotakura mabhuku emitauro yakawanda, uye vakawanda vanotora maturakiti nemagazini. Anovakurudzirawo kuti vazoenda panzvimbo yedu yekubudisira mashoko yejw.org. Akatanga zvidzidzo zveBhaibheri zvakawanda.
Sonia anogara akagadzirirawo kuparidzira chero waanowana. Anoshanda pasejari yemumwe chiremba, uye ane chinangwa chekuparidzira munhu mumwe nemumwe waanoshanda naye. Akatanga nekutsvaga zvinofarirwa nemumwe nemumwe wavo. Zvadaro akazotanga kushandisa nguva yekumbozorora yemasikati kutsvaga mumwe nomumwe wavo kuti ataure navo nyaya dzekunamata. Izvi zvakaita kuti Sonia atange zvidzidzo zveBhaibheri zviviri. Ari kurongawo kushandisa nguva yaanombozorora pabasa kuti aparidzire varwere vanenge vakamirira kuona chiremba.
SHANDISA ZVAKANAKA MIKANA YAUINAYO
Mumwe akapona kudengenyeka kwenyika kwakaitika muna 1906 akakutsanangura “sedambudziko guru rati ramboitika muguta chero ripi zvaro.” Asi, matambudziko ose akamboitika haazokwanisi kuenzaniswa nezvichaitika pazuva rekutsiva riri kuuya pane “vaya vasingazivi Mwari.” (2 VaT. 1:8) Jehovha ane chido chikuru chekuti vanhu vachinje pfungwa dzavo nemwoyo uye vararame zvinoenderana nemashoko enyevero ari kupiwa neZvapupu zvake.—2 Pet. 3:9; Zvak. 14:6, 7.
Unokwanisa here kushandisa mikana yose kuti uparidze paunenge uchiita mabasa ako ezuva nezuva?
Une chikomborero chekuvhura maziso evanhu kuti vaone nguva yakaoma yatiri uye kuvabatsira kuti vasiye zvekungozvifadza vatsvake Jehovha. (Zef. 2:2, 3) Unokwanisa here kushandisa mikana yose kuti uparidzire vaunoshanda navo, vavakidzani, uye vaya vaunosangana navo zuva nezuva? Uchawedzera zvaunoita pakunyevera vamwe here?